တရုတ်ပိုစတာ LED Display ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |AVOE
ပိုစတာ LED Display Player သည် တောက်ပမှုမြင့်မားပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော၊ အလွန်ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသောကိုယ်ထည်ဖြင့် မြင့်မားသောပေါင်းစပ် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် အပြင်ဘက်ရှိ LED ကြော်ငြာပလေယာပါရှိသော မိုးလုံလေလုံ HD LED ကြော်ငြာပလေယာအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းကို ပစ်မှတ်ထားကာ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည်။
ပိုစတာ LED Display သည် တပ်ဆင်မှုဖြေရှင်းချက်အမျိုးမျိုး၊ လွယ်ကူသောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ဆက်သွယ်ရေးမုဒ်များစွာ၊ တောက်ပမှုမြင့်မားသော၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီး အလွန်ပါးလွှာသောကိုယ်ထည်နှင့် တောက်ပသောအလင်းရောင်ရှိသောနေရာများတွင်ပင် အရည်အသွေးမြင့်ပြသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာစေမည့် အင်္ဂါရပ်များပါ၀င်ပါသည်။၎င်းသည် ရိုးရာ LCD ကြော်ငြာပလေယာ (စျေးမြင့်ခြင်း၊ အရည်အသွေးနိမ့်ရုပ်ပုံ၊ မညီညာသော တောက်ပမှု၊ လေးလံသော ကိုယ်ထည်နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားခြင်း) ကို အစားထိုးသည့် ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ဘဏ်များ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများ၊ ဆေးရုံများတွင် တွင်ကျယ်စွာ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ နောက် ... ပြီးတော့။
ပေါ့ပါးသော P2.5mm LED ပိုစတာ မျက်နှာပြင် / ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုစတာ မျက်နှာပြင် ကြော်ငြာ 640*1920mm
ပိုစတာ LED မျက်နှာပြင်သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး LED မျက်နှာပြင်နီးပါးဖြစ်သည်။ပါးလွှာပြီး ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဖြင့် ရွေးချယ်စရာ7ရောင်ရှိသည်။အရေးကြီးဆုံးမှာ သမားရိုးကျ ကြော်ငြာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆော့ဖ်ဝဲ ဆက်တင်များအတွက် လွယ်ကူသည်၊ စာသား၊ ရုပ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် အသံတို့ကို မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်၊ တောက်ပမှု မြင့်မားစွာ ပြသနိုင်သည်။
Shopping Mall ကြော်ငြာ P2.5mm HD LED ပိုစတာ Display Floor Stand Alone လွယ်ကူစွာ ရွေ့လျားနိုင်သော 640*1920mm
သင့်စတိုးဆိုင်များတွင် ထားနိုင်ပြီး ကြမ်းပြင်ရပ်ခြင်း၊ နံရံတွင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ တွဲလောင်းနှင့် အထပ်လိုက်များဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်2ခုထက်ပို၍ လွတ်လပ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
LED ပိုစတာသည် စည်းဝေးကြီးနှင့် ပြပွဲစင်တာ၊ စျေးဝယ်စင်တာ၊ ညီလာခံ၊ ခန်းမ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ ဖျော်ဖြေပွဲ၊ လေဆိပ်ဘူတာရုံ၊ စူပါမားကတ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။စားသောက်ဆိုင်၊ ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုနှင့် အခြားအချိန်အခါများ။
1. WiFi / 4G / APP / USB / PC မျိုးစုံ ဆက်သွယ်ရေး
2. အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် စုစည်းထားသော ကြော်ငြာနှင့် အသံစပီကာ ပိုစတာတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
3. အလွယ်တကူ ရွေ့လျားခြင်း၊ မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ နံရံတပ်ခြင်း၊ အများအပြား တပ်ဆင်ခြင်း။
4. Multiple Pitches P2/P2.5/P3
အရွယ်အစားမျိုးစုံနှင့် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား 1920 x 640/480 မီလီမီတာ
5. Multiple Screens ချိတ်ဆက်မှုတွင် အကြောင်းအရာများကို ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
6. HD ရုပ်ပုံအရည်အသွေး
7. ပြန်လည်စတင်မှုနှုန်း 3840Hz အထိ၊
8. 1500nits တွင် တောက်ပမှု၊ LCD မျက်နှာပြင်ထက် ၃ ဆ ပိုတောက်ပသည်။160° ရှုထောင့်၊
10. မြင့်မားသောတောက်ပမှု၊ အလွန်ပါးလွှာပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသော မိုးလုံလေလုံ LCD ပိုစတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။
11. LED ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုစတာသည် တောက်ပသော အခါသမယများအတွက်လည်း သင့်လျော်သည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ- စူပါမားကတ်၊ စျေးဝယ်စင်တာ၊ သီးသန့်အေဂျင်စီ၊ ကွင်းဆက်ဆိုင်များ၊ ဌာနဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ခရီးသွားအေဂျင်စီ၊ ဆေးဆိုင်၊ အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များ၊ အုပ်စုရုံးချုပ် စသည်ဖြင့်၊
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ- ဘဏ်များ၊ ညှိနှိုင်းနိုင်သော လုံခြုံရေးများ၊ ရန်ပုံငွေများ၊ အာမခံကုမ္ပဏီ၊ အပေါင်ဆိုင်များ၊ စသည်တို့။
အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့များ- ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်များ၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်းစသည်ဖြင့်၊
အများသူငှာ နေရာများ- မြေအောက်ရထား၊လေဆိပ်၊ မီးရထားဘူတာရုံ၊ ကားဂိတ်၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်၊ တိုးဂိတ်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်၊ ပန်းခြံများ၊ ပြပွဲခန်းမ၊ အားကစားကွင်း၊ ပြတိုက်များ၊ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာများ၊ လက်မှတ်ရုံးများ၊ အလုပ်ဌာန၊ ထီစင်တာ စသည်ဖြင့်၊
အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှု- တိုက်ခန်းများ၊ ဗီလာများ၊ ရုံးခန်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံများ၊ စံပြအခန်းများ အိမ်ခြံမြေပွဲစားများ စသည်တို့။
ဖျော်ဖြေရေး- ပြဇာတ်ရုံ၊ Fitness Hall၊ Country Club၊ Massage Shop၊ Bars၊ Cafes၊ Internet Bars၊ Beauty Shop၊ Golf Course Center စသဖြင့်
Physical Density ၊
inter pixel ၏ ခံနိုင်ရည် ≤0.3mm
အလျားလိုက် 140° ဒေါင်လိုက် 120°
အပူချိန် -10 ℃ ~ 60 ℃
စိုထိုင်းဆ 10% ~ 70%
ကွန်ရက်ကြိုး- 100 မီတာ၊ မော်ဒယ်မျိုးစုံ- 500 မီတာ၊
မော်ဒယ်တစ်ခုတည်း ဖိုက်ဘာ- 20 ကီလိုမီတာ
WIFI၊ HDMI၊ USB စသည်တို့
ထပ်တူပြုခြင်း / အညီအမျှစနစ်
ပလပ်နှင့် ကစားခြင်း၊ ဖြတ်ကျော်ခြင်း လုပ်ဆောင်ခြင်း။
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကစားပါ။
မျက်နှာပြင်ကို ပုံသေ သို့မဟုတ် အိတ်ဆောင် Windows ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊
IOS နှင့် Android စက်များ။
အကြောင်းအရာကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး built-in မီဒီယာပလေယာတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
အပြိုင်အဆိုင်ကစားခြင်းအောင်မြင်ရန် WIFI သို့မဟုတ် USB မှတဆင့်။
ဘက်စုံတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းသည် ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ နံရံတွင်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ကြမ်းပြင်မတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့် inclined strut တပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့ ဖန်တီးမှုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။.
1. ရောင်းချခြင်းမပြုမီ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
ဖြေရှင်းချက်အတည်ပြုခြင်း၊ လုပ်ငန်းမစမီ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း
စက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ တပ်ဆင်မှု အမှားရှာပြင်ခြင်း။
တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်၊ ဆိုက်တွင် အမှားရှာပြင်ခြင်း။
အချိန်မီမှု၊ စာနာမှု၊ သမာဓိ၊ ကျေနပ်မှု ဝန်ဆောင်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသဘောတရားကို အမြဲတစေတောင်းဆိုနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံမှ ယုံကြည်မှုနှင့် ဂုဏ်ယူမှုကို ဂုဏ်ယူပါသည်။
မည်သည့်မေးခွန်းကိုမဆိုဖြေဆိုပါ။တိုင်ကြားချက်အားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို နှိုးဆော်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုမစ်ရှင်ဖြင့် ဖောက်သည်များ၏ ကွဲပြားပြီး တောင်းဆိုနေသော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းကို တီထွင်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ကျွမ်းကျင်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်၊ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကို ဖြည့်ဆည်းရန် အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဝန်ဆောင်မှုပန်းတိုင်ကို အမြဲမှတ်ထားပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးများကို မကြွားနိုင်သော်လည်း သုံးစွဲသူများ စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှ ကင်းဝေးစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါမည်။ပြဿနာများကြုံလာသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ရှေ့တွင် အဖြေရှာပြီးသားဖြစ်သည်။
ယခင်- Fine Pitch LED Display
နောက်တစ်ခု: ပုံသေ LED Display M စီးရီး
လုပ်ငန်းသုံးကြမ်းပြင် Stand Led ပိုစတာပြသခြင်း။
Portable Led ပိုစတာ မျက်နှာပြင်
Led Display မျက်နှာပြင် Outdoor Led Display ၊ ဆိုင်းဘုတ် Outdoor Led မျက်နှာပြင် Led မျက်နှာပြင် LED ရုပ်ထွက်